ကွန်ဖူးမင်းသားကြီး ဂျက်လီရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အချက်များ - CantWait2Say
ရုပ်ရှင်ရုံတွေ မရှိတဲ့ နယ်ဘက်ဒေသတွေမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ဗီဒီယိုရုံယဉ်ကျေးမှုဟာ တကယ့်ကို အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြီးပါပဲ ။ အဲ့ဒီအချိန်က တရုပ်ကွန်ဖူးကားတွေကို ကောင်းကောင်းကြည့်ဖူးသူ ဒါမှမဟုတ်VCD ခေတ်ဦးမှာ ခွေငှားဆိုင်တွေကနေ ဇာတ်ကားတွေ ငှားကြည့်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ တရုတ်ကွန်ဖူးကားတွေဟာ မပါမဖြစ် အမှတ်တရတွေထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကလေးဘဝက ရူးသွပ်စွာကြည့်ခဲ့ရတဲ့ တရုတ်ကွန်ဖူးကားတွေထဲမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားတွေထဲမှာ ဆိုရင်လည်း ဂျက်လီက ကျနော်တို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေ အမှတ်တရတွေထဲမှာ မပါမဖြစ်လူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုရင် အားလုံးလည်း သဘောတူကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ။ အခုကျနော်တို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းကတော့ ဂျက်လီရဲ့ ဘဝ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျက်လီရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ လီဂျန်လီဖြစ်ပြီး ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဧပြီလ၂၆ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မောင်နှမမွေးချင်း ၄ ယောက်ရှိပြီး မိသားစုထဲမှာ အထွေးဆုံးပေမယ့် သူ၂နှစ်သားအရွယ်မှာပဲ သူ့ရဲ့ ဖခင်က ကွယ်လွန်သွားတာပါ ။ ဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဂျက်လီတို့ တမိသားစုလုံးဟာ ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဂျက်လီကတော့ ၈ နှစ်သားအရွယ်ကတည်းက ဝူရှုးသိုင်းပညာမှာ ထူးချွန်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး စတင်လုပ်ကိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ လီဂျန်လီဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဖြုတ်ပြီ ဂျက်လေယာဉ်လို့ အရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်မြင်အောင်ဆိုပြီး ဂျက်လီဆိုတဲ့ နာမည်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။
ဝူရှုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုတံဆိပ် ၁၅ ခုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရစ်ချက်နစ်ကဆင်က သက်တောင်စောင့်လုပ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၂ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ သရုပ်ဆောင်လောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှာတင်သာမက Hollywood ထိ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ မှာတော့ ဂျက်လီဟာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Lethal Weapon 4၊ Romeo Must Die? Kiss of the Dragon၊ The One၊ Unleashed၊ Fearless စတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာ သူရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ကျခဲ့သူဖြစ်ပြီး သမီးလေးယောက်ရဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အမေရိကန် ၊ တရုတ် ၊ စင်္ကာပူစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူထားသူတစ်ဦး ပါ။
ရုပျရှငျရုံတှေ မရှိတဲ့ နယျဘကျဒသေတှမှော ကွီးပွငျးလာခဲ့ကွတဲ့ လူတှအေတှကျတော့ ဗီဒီယိုရုံယဉျကြေးမှုဟာ တကယျ့ကို အမှတျတရဖွဈစတေဲ့ ယဉျကြေးမှုကွီးပါပဲ ။ အဲ့ဒီအခြိနျက တရုပျကှနျဖူးကားတှကေို ကောငျးကောငျးကွညျ့ဖူးသူ ဒါမှမဟုတျVCD ခတျေဦးမှာ ခှငှေားဆိုငျတှကေနေ ဇာတျကားတှေ ငှားကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ သူတှအေတှကျတော့ တရုတျကှနျဖူးကားတှဟော မပါမဖွဈ အမှတျတရတှထေဲက တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ကလေးဘဝက ရူးသှပျစှာကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ တရုတျကှနျဖူးကားတှထေဲမှာသရုပျဆောငျတဲ့ မငျးသားတှထေဲမှာ ဆိုရငျလညျး ဂကျြလီက ကနြျောတို့ရဲ့ မှတျဉာဏျတှေ အမှတျတရတှထေဲမှာ မပါမဖွဈလူတဈယောကျ ဖွဈခဲ့ကွတယျဆိုရငျ အားလုံးလညျး သဘောတူကွလိမျ့မယျထငျပါတယျ ။ အခုကနြျောတို့ ရဲ့ မိတျဆှတှေကေို ဖျောပွပေးသှားမယျ့ အကွောငျးကတော့ ဂကျြလီရဲ့ ဘဝ တဈစိတျတဈပိုငျးအကွောငျးလေးပဲဖွဈပါတယျ။
ဂကျြလီရဲ့နာမညျအရငျးကတော့ လီဂနျြလီဖွဈပွီး ၁၉၆၃ ခုနှဈ ဧပွီလ၂၆ ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မောငျနှမမှေးခငျြး ၄ ယောကျရှိပွီး မိသားစုထဲမှာ အထှေးဆုံးပမေယျ့ သူ၂နှဈသားအရှယျမှာပဲ သူ့ရဲ့ ဖခငျက ကှယျလှနျသှားတာပါ ။ ဖခငျဖွဈသူကှယျလှနျသှားပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ဂကျြလီတို့ တမိသားစုလုံးဟာ ဘဝကို ခကျခကျခဲခဲ ကွိုးစားရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ ဂကျြလီကတော့ ၈ နှဈသားအရှယျကတညျးက ဝူရှုးသိုငျးပညာမှာ ထူးခြှနျခဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျရိုကျကူးရေး စတငျလုပျကိုငျတဲ့အခြိနျမှာတော့ လီဂနျြလီဆိုတဲ့ နာမညျကို ဖွုတျပွီ ဂကျြလယောဉျလို့ အရှိနျဟုနျကောငျးကောငျးနဲ့ အောငျမွငျအောငျဆိုပွီး ဂကျြလီဆိုတဲ့ နာမညျကိုခံယူခဲ့ပါတယျ။
ဝူရှုးနဲ့ပတျသကျပွီး ဆုတံဆိပျ ၁၅ ခုရယူပိုငျဆိုငျခဲ့ဖူးသူဖွဈပွီး အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ သမ်မတတဈဦးဖွဈတဲ့ ရဈခကျြနဈကဆငျက သကျတောငျစောငျ့လုပျပေးဖို့ ကမျးလှမျးခွငျးကိုလညျးခံခဲ့ရသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ ၁၉၈၂ ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ သရုပျဆောငျလောကကို စတငျဝငျရောကျခဲ့ပွီး ပွညျတှငျးမှာတငျသာမက Hollywood ထိ အောငျမွငျခဲ့တဲ့သူဖွဈတယျဆိုတာကိုလညျး အမြားသိပွီးသားဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဟောငျကောငျရုပျရှငျထူးခြှနျဆုပေးပှဲ မှာတော့ ဂကျြလီဟာ အကောငျးဆုံးအမြိုးသားသရုပျဆောငျဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ Lethal Weapon 4၊ Romeo Must Die? Kiss of the Dragon၊ The One၊ Unleashed၊ Fearless စတဲ့ရုပျရှငျတှဟော သူရဲ့ အောငျမွငျတဲ့ရုပျရှငျကားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျနှဈဆကျကခြဲ့သူဖွဈပွီး သမီးလေးယောကျရဲ့ ဖခငျတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ အမရေိကနျ ၊ တရုတျ ၊ စင်ျကာပူစတဲ့ နိုငျငံတှမှော နိုငျငံသား အဖွဈခံယူထားသူတဈဦး ပါ။